Ruushka oo fashiliyay shirqool lagu khaarijin lahaa R/wasaare Vladimir Putin. – Radio Daljir
Ruushka oo fashiliyay shirqool lagu khaarijin lahaa R/wasaare Vladimir Putin.
Moscow,Feb 27 -Television-ka Channel One ee ay maamusho dowladda Russia ayaa maanta oo isniin ah ku waramay in sirdoonka dalkaasi ay qabteen 2 nin oo lagu lagu xidhiidhiyey in qorsheynayeen shirqool lagu khaarijinlahaa reysalwasaaraha dalkaasi ee Vladimir Putin.
Television-ka ayaa sheegay in 2da nin ee la qabtay ay ku shaqaynayeen awaamirta hogaamiye dagaal oo u dhashay gobolka Chechnya ama Shiishaan oo lagu magcaabo Doku Umarov.
Maxadadaasi Channel one ayaa sheegtay in raga shirqoolka maleegayey ay ka yimaadeen dalka Ukraine ,iyagoo ku safrayey diyaaradda United Arab Emirates,waxana televisonku tilmaamay in raggasi ay soo mareen dhinaca dalka Turkiga.
Mid ka mid ah raga shirqoolka waday ayaa bishii January ku dhintay qarax , kaasi oo keenay in baadhitaankan la sameeyo sida lagu sheegay warbixintan laga sii daayey television-ka Channel one ee ay maamusho dowladda Russia.
Saraakiisha Russia ayaa sheegaya in qorshuhu ahaa in Reysalwasaare Putin la shirqoolo marka ay qabsoonto doorashada madaxtinimada ee dalkaasi bisha soo socota ee march markaasi oo loo badinayo in xilka madaxtinimada ee dalkaasi loo doorto hogaamiyahan rug-caddaaga ah ee Vladimir Putin.